Baalayaal - Qalinleyaal - Delta Injineer Beljam
Sahamiyaasha - Xirayaasha
Kaydso qaybta "Palletizers - Depalletizers"
Jimcaha, 24 Febraayo 2017 by Cristina Maria Sunea
Halbeega xaashida - dherer hoose
Fikrad qaybsan & rogrogmi kara taas oo daalin kara, dib u dhigi kara isla markaana xajin karta xaashiyo fidsan, looxyada sare, baakidhyo, daboollo, santuuqa caadiga ah.
Xawaare hoose oo caadi ah.
Dherer hoose (1600mm max).
Published in Sahamiyaasha - Xirayaasha
Qaybta meelaynta xaashida
Dherer buuxa (3500mm max).
Monday, February 27 2017 by Cristina Maria Sunea
Qaybta meelaynta xaashida waxqabadka sare
Fikrad qaybsan & dabacsanaan leh oo kala dhigi kara, dib u dhigi kara isla markaana kaydsan kara xaashiyo fidsan, looxyada sare, baakadaha, daboolka, santuuqa xawaaraha sare leh.
Iyada oo xawaare sare oo adeegsi ah.
Arbaco, 01 Maarso 2017 by Cristina Maria Sunea
Qeyb qaybinta qaybsan ee alaabada dhererkeedu hooseeyo
Unugga palletizing qaybsan oo leh muraayad wax lagu xiro taas oo ka hortageysa dhalooyinka dhaadheer ee dhaadheer in ay ku dhex wareegaan bacda markii la qabto.
Qayb ka mid ah wareejinta wareegga wareejinta iyo baabi'inta
Fikrad qaybsan & dabacsan oo u oggolaanaysa codsiyo kala duwan: palletizing, depalletizing & buffering.
Wuu fasixi karaa / saari karaa go'yaal fidsan, looxyada sare, baakidhyo, daboollo, santuuqa…
Wuxuu gaari karaa 4 boos oo goobada ah.
Qeyb xariiqa toosan oo qaybsan iyo qayb ka saarid
Wuxuu gaari karaa 3 boos si toos ah.